Fiidiyowgan laga soo qaaday Spigit, oo ku dhawaaqay ku biirista maal-galiyeyaashayaga 'Mindjet', ayaa ka dhigaya qodobo muhiim ah fiidiyowgan oo aan marnaba la iska indhatiri karin: Innovation = Ideation + Execution. Fikradaha iskood uma ahan kuwa hal abuur leh, waa in lagu dhaqaaqo. Fikradda ugu caansan had iyo jeer maahan fikradda ugu fiican ee natiijooyinka ganacsiga. Badanaa, waxaan daawan jirnay shirkado hoos u dhigaya arrin kasta oo macaamiil ah si aan u aragno ganacsigaas oo fashilmay. Mararka qaarkood waxa macmiilku codsado uma qalanto
Adduunku wuu is beddelayaa. Suuqa adduunka, ka baxsan, shaqaalaha fog fog of arrimahan soo kordhaya oo dhami waxay ku dhacayaan goobta shaqada waxayna u baahan yihiin qalabyada la socda. Wakaaladeena gudaheeda, waxaan u adeegsanaa Mindjet (macmiilkayaga) maskaxda iyo howlaha socodka, Yammer wadahadal, iyo Basecamp oo ah keydkeena shaqada qadka. Laga soo bilaabo Clinked's Infographic, Xaaladda Wadashaqeynta Internetka: Khibradayada, iyo tan kuwa nala tartamaya, gabi ahaanba waa shaki la'aan: 97% ganacsiyada isticmaalaya barnaamijka iskaashiga
Macaamiilkeenna, Mindjet, wuxuu soo saaray deeq cusub oo si gaar ah loogu talagalay shirkadaha. Intaa waxaa sii dheer, waxay soo rogeen cusbooneysiin ku saabsan Isku-xirkooda wax soo saarka maareynta shaqada - iyagoo keenaya isku-xirnaan buuxda oo ku saabsan Webka, desktop-ka iyo aaladaha moobaylka wakhti kasta, meel kasta oo lala kaashanayo (iyo degel cusub oo u dhigma xalalka cusub). Mindjet Connect V4 waxay sii wadaa isbeddelka sheyga si ay u siiso hal khibrad oo adeegsade ah oo isku xirta fikradaha iyo qorshooyinka iyadoo la fulinayo qorshayaashaas. Isticmaalayaasha Mindjet Connect